Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Klopp oo sheegay in Mo Salah uu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka Xiligan | Dayniile.com
Home Warkii Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Klopp oo sheegay in Mo Salah uu...
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Klopp oo sheegay in Mo Salah uu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka Xiligan
Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool, Jurgen Klopp, ayaa Maxamed Salaax ugu yeeray inuu yahay ciyaaryahanka “ugu wanaagsan” dunida kaddib markii laacibkaasi reer Masar uu ciyaar layaab leh soo bandhigay guushii ay kooxdiisa 5-0 ku martay kooxda Watford.
Salaax ayaa baas cajiib ah u dhigay Sadio Mane oo dhaliyay goolka koobaad ee ciyaarta, iyadoo uu soo bandhigay ciyaar wanaagsan dhaliyayna gool qurux badan.
“Waa ciyaaryahan sare. Waannu aragnaa dhammaantayo. Yaa ka wanaagsan?” ayuu Klopp u sheegay BT Sport.
“Ciyaaro layaab leh ayuu maanta soo bandhigay. Si qurux badan ayuu goolka koobaad u baasay goolka labaadna mid gaar ah ayuu ahaaba.”
Mo Salah ayaa haatan kooxda Reds-ka waxa uu gool dhalinayay 8 kulan oo xiriir ah, taas oo ah middii ugu dheerayd ee xiriir ah oo kooxda ay gaarto tan iyo markii Daniel Sturridge uu Febraayo 2014 uu goolal dhaliyay sideed kulan oo xiriir ah.
Goolka Salaax ee maanta ayaa waxa uu la samiyay goolashii 104-ta ahaa ee uu laacibkii hore ee kooxda Chelsea Didier taas oo aheyd goolashii ugu badnaa ee uu ciyaaryahan Afrikaan ah ka dhaliyo horyaalka Kubadda Cagta ee Ingiriiska.
Previous articleJanaraalka hogaamiya dowladda milateriga Myanmar oo laga reebay Shir
Next articleKumannaan dibadbaxayaal ah oo hor tuban madaxtooyada Suudaan
C/raxmaan C/shakuur Xildhibaan Mahad Salaad iyo Xildhibaan Cabdixakiim Maalin oo ka...